ဇွန် 19, 2015 ဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
06.19.15 | Hissho သည် Hot-Lanta တွင်ယင်းကိုအပူပေးသည်။
Hissho အဖွဲ့သည်ယခုနှစ် IDDBA Dairy-Deli-Bake နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့် Ga Atlanta ရှိ Expo တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မသိသောသူတို့အဘို့, IDDBA International Dairy-Deli-Bakery Association သည်နို့၊ အသင့်စားသုံးသူနှင့်မုန့်ဖုတ်ပညာရှင်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် Wisconsin ဒိန်ခဲဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနို့၊ အသင့်စားဆိုင်၊ ကိတ်မုန့်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှပညာရှင်များ၏ပြောင်းလဲနေသောလိုအပ်ချက်များကိုထင်ဟပ်ရန်နှစ်များတစ်လျှောက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။
နှစ်စဉ် IDDBA သည်နှစ်စဉ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့်“ Dairy-Deli-Bake” ပြပွဲကို ပြုလုပ်၍ နို့၊ အသင့်စားဆိုင်နှင့်ကိတ်မုန့်တို့တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ၊ အဆက်အသွယ်အသစ်များ၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက Hissho သည်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြပွဲတွင်ပြသခဲ့သည်။
Hissho လေယာဉ်အမှုထမ်းသည်သောကြာနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စားသောက်ကုန်များကိုချွတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တဲနေရာကိုစစ်ဆေးရန်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ (ကျနော်တို့နှင့်အတူအိမ်နီးချင်းဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုစူပါ stoked ခဲ့ကြသည် Stacy ၏ Pita ချစ်ပ်များ နှင့် Sabra - Nomz?! လို့ပြောလို့ရမလား
စနေနေ့မှာငါတို့အစောပိုင်းလှုပ်ရှားမှုထဲခုန်ချလိုက်တယ်၊ ငါတို့တဲကိုဆောက်ပြီးနမူနာတွေအတွက်အစားအစာပြင်ဆင်တယ်။ ဒီနှစ်ပြပွဲကငါတို့အတွက်အထူးသီးသန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့ပူပြင်းတဲ့အစားအစာအစီအစဉ်ကိုပွဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာ၊ Go to အာရှအလားအလာအသစ်များသို့ ထို့ကြောင့်ပူသောအစားအစာနှင့်ဆူရှီနှစ်မျိုးစလုံးကိုကောက်ယူရန်မှာနှစ်ဆတာ ၀ န်တစ်ခုအနေဖြင့်အဖွဲ့သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစွာခုတ်ထွင်ခဲ့သည်!
အားလုံးအားလုံးအတွက်, ငါတို့အကြီးအပြပွဲရှိခဲ့ပါတယ်! ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသစ်တန်ချိန်များစွာနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်ပြီးအကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်မျက်နှာအချို့ကိုတွေ့မြင်ရပြီးအလွန်ဆိုးဝါးသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအစာအချို့ကိုစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်လူတိုင်းကိုထပ်မံတွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်ပါသည်။